Ama-movie we-12 wokujabulela leli hlobo | Izindaba zamagajethi
Ama-movie we-12 wokuthokozela kuleli hlobo
AmaVillamandos | | Ama-movie nochungechunge, General
Ihlobo selivele selifikile, kwabaningi cishe benganakile, futhi ngalezo zikhathi zantambama lapho ukushisa kwenza kube nzima ukuphuma ngaphandle noma okungenani akulincomi, alikho icebo elingcono kunokubuka ibhayisikobho egumbini lokuphumula ekhaya. Kungaba umqondo omuhle futhi ukuya kuma-movie ukubona okukodwa okusha okukhishiwe. Kukho konke lokhu Namuhla sifuna ukuphakamisa ama-movie ayi-12 esingajabulela ngawo kuleli hlobo futhi sijabule.
Kulawa mafilimu ayi-12 kunezinhlobo zonke futhi singahleka kakhulu, kodwa futhi sikhala size simemeze ngokwesaba. Vele lolu uhlu lwethu, kepha sizojabula uma usitshela ukuthi akufanele siphuthelwe amanye amafilimu kuleli hlobo. Vele, ukuthola irekhodi esikunikeza lona kuphela uhlu lwama-movie, ukuthi uwabone kuphi nokuthi uwabona kanjani kukuwe, noma ngabe ngithemba ukuthi awusoze wakhohlwa upopayi noma isiphuzo esithambile noma ubhiya omuhle obandayo.
2 Gru, isikhohlakali sami engisithandayo
7 ISan Andrés
8 I-Jurassic World
9 I-Ted 2
10 Indlela eya ekubhujisweni
Enye yamafilimu abelindelwe kakhulu ezikhathini zakamuva ngu AbakwaMiniinios, labo bantu abancane abaphuzi abakhuluma ngokungaqondakali futhi inhloso yabo kuphela ukukhonza inkosi embi kakhulu abayitholayo. Yize iyifilimu enopopayi, ingenza umuntu wanoma yimuphi ubudala amomotheke futhi kungaba yi-movie ephelele ukuchitha intambama emnandi ebhayisikobho.
Isincomo esibalulekile ukuthi ungazami ukuqonda amanxusa, ngoba lapho uzolahlekelwa yichungechunge lonke le-movie, uzama ukuqonda ukuthi uKevin noma uStuart bathini.
Gru, isikhohlakali sami engisithandayo
Ama-Minions abengebona abalingiswa kwifilimu eyinhloko njengalezo eziqala ukuboniswa kumabhayisikobho emhlabeni wonke, futhi lokho Baqale ukubonakala ku-Despicable Me Gru, umdlalo wamahlaya omusha opopayi lapho izingane zakho ziyohleka nazo ngokungapheli, futhi ungaze ugcine ngokukhala ngokuhleka. Uma ufuna ukuqhubeka nokuhleka ungabona ingxenye yesibili yale filimu.
Ukulungele ukuba ngumuntu omubi kakhulu emthaleni?
Yize ama-Pixels engeke akhishwe kumatiyetha kuze kube nguJulayi 24 olandelayo kumatiyetha, sesivele siyibona i-trailer esemthethweni ngaso sonke isikhathi kuzikhangiso zethelevishini.
I-movie, ngaphandle kokuba yi-geek enkulu, akubukeki kubi. Ake sifunde ingxenye yesifinyezo sayo esisemthethweni; «Ngo-1982, iNASA yathumela i-capsule emkhathini ngethemba lokuxhumana nezinye izinhlobo zokuphila. Bekubandakanya izibonelo zempilo yethu namasiko ethu. Kwenzelwe ukuba kube ngumyalezo wokuthula, kepha kwaba nokungaqondi ... Abanye abafokazi Bathumele imidlalo yevidiyo yangempela ukusihlasela".
Ngabe ukhona umuntu osangabaza ukuthi kufanele siye ukumbona kuleli hlobo kuma-movie?
Ihlobo ngaphandle kokujabulela i-movie, hhayi ukusho umsebenzi wobuciko, we Clint Eastwood akusilo ihlobo. Kulolu hlu sikhethe uGran Torino, yize noma yimaphi amafilimu alo mdlali wodumo angasenza sijabulele futhi sibe nesikhathi esimnandi kuleli hlobo.
Ulungele umthamo we-Eastwood omuhle kakhulu?. Vele, ungazami ukumlingisa ngoba akanakulinganiswa futhi angakulethela nemiphumela emibi.
Le movie esabisayo lapho umlingisi waseSpain IMacarena Gómez ifaka indima ye-macabreKungaba elinye lama-movie amahle kakhulu afinyelela kumatiyetha ezikhathini zakamuva. Manje njengoba itholakalela ukuyibuka ekhaya, ikhululekile kusofa, kufanele ukuthi ibe enye yamafilimu abalulekile kuleli hlobo.
Vele, ngaphambi kokuzethula ukuze ulibone, kufanele wazi ukuthi kunegazi kuyo yonke indawo futhi kunezigcawu ezimbalwa ezingathandeki ezingazilungele zonke izisu futhi ezingaguqula isisu sanoma ngubani. Noma ngabe kusehlobo, thatha ingubo encane futhi njalo lapho izinto ziba zimbi, vala ukuthi yimaphi amehlo angaboni ...
Alikho ihlobo eliphelele uma ngabe ifilimu yakudala futhi sinqume ukuyifaka ICasablanca, ifilimu edume ngokulingisa uHumphrey Bogart no-Ingrid Bergman nokuthi sonke sike sabona kaningana, kepha ukuthi akukaze kube kuningi kakhulu ukuphinde sikubone ukukujabulela. Uyazi, kuleli hlobo uyidlale futhi bese uyikhipha ebhokisini layo ukuze uyibeke kwi-DVD yegumbi lokuphumula.
Uma usuvele ubonile iCasablanca kaningi kakhulu, ungayifaka esikhundleni sayo ngenye iklasikhi enhle yazo zonke izinto ezikhona ongazithokozela.
Ngaphandle kokushisa okwenza lezi zinsuku enye yezindawo ezinhle kakhulu ukuba khona kumabhayisikobho nokubuka isibonelo ISan Andrés, kuphi Dwayne Johnson Izosinika isilinganiso esikhulu sezenzo nemiphumela ekhethekile, kwesinye isikhathi ayithembeki kakhulu.
Kule filimu, uJohnson udlala umshayeli wendiza enophephela emhlane onezinkinga eziningi empilweni yakhe, okunezelwa ukuzamazama komhlaba okukhulu okungasekho futhi okungaphansi kobukhulu obungu-9 ngephutha laseSan Andreas.
Ingabe into iyathembisa?.
Akungabazeki ukuthi ibingenye yamafilimu abelindelwe kakhulu kulo nyaka ka-2015 futhi isivele isemabhodini amakhulu emhlabeni jikelele I-Jurassic World. Kule filimu sizobona ama-dinosaurs amaningi futhi njengoba kwenzeka eJurassic Park iphrojekthi ayihambi njengokulindelekile Futhi kugcina ngenhlekelele ezosigcina sinamathele esihlalweni se-cinema. Ngenhlanhla kuzodingeka ungagijimi ukuze uzisindise, yize ngingazi ukuthi uzokwazi yini ukudla upopu omningi kakhulu.
Uma ungakaze uyibone ifilimu yoqobo, ungakhathazeki, akunandaba ngoba ungazibeka kahle futhi ujabulele lesi sitolimende esisha ngaphandle kwenkinga.
Ihlobo ukuhleka nokujabulela futhi U-Ted, lelo bhere elinamahloni nelinesibindi lize lifike emikhawulweni ephelele, kungaba ngumlingiswa ophelele ongakuhleka uze ukhale. Usivele usikhombisile ukuthi ubekwazi ukwenzani kumafilimu akhe okuqala futhi kubonakala sengathi kulo mzuzwana ukulungele ukukunqoba.
Siphonswe phansi ngohleko ngefilimu yokuqala kaTed, kepha uma ungatholanga amahlaya noma uwathola enyanyeka, kungaba umqondo omuhle ukukhetha enye yamafilimu ohlwini. I-Ted kule mzuzwana ingena iyaqhubeka kulayini wokuqala noma okubi kakhulu. Uyaxwayiswa.
Indlela eya ekubhujisweni
Uma ihlobo ngaphandle kwe-Clint Eastwood movie akuyona ihlobo elijwayelekile, elinye ngaphandle kokubona Paul Newman, nge-swagger yayo ejwayelekile, ngeke kube yihlobo elihle futhi. Indlela eya ekonakaleni ibingenye yamafilimu okugcina lapho lo mlingisi omkhulu abambe iqhaza khona futhi uma ungivumela ngingakutshela ukuthi ingenye yamafilimu engiwathandayo. Uma ungakayiboni okwamanje, ngingayincoma kakhulu..
Ingabe usukulungele ukuhamba ngendlela yakho ukubhujiswa ngesandla sikaPaul Newman?
Ama-oda wami we-Windows e-Isitolo se-Windows Amafilimu amahlaya aseSpain akhuphule izinga futhi uPrimos ungomunye walabo okungekho muntu okufanele ayeke ukubukela, kuleli hlobo, kulobu busika noma ngonyaka ozayo, yize isincomo sethu ukuthi uma ungakakuboni okwamanje, uzohlala phansi noma yiluphi usuku kuleli hlobo ukukubona futhi uhleke ngaphandle kokuma.
Uma udinga amazwibela amafushane ale movie, ngoba ukuba yiSpanish uyakungabaza (okuthile okujwayelekile), kufanele wazi ukuthi umkhwenyana ulahliwe ezinsukwini ezi-5 ngaphambi komshado wakhe, kepha unquma ukuvela esontweni uma kwenzeka umakoti ezisola ngokuhamba kwesikhathi qala i-adventure engapheli.
Ukuvala lolu hlu angikwazanga ukumelana nokubeka lapha a i-quentin tarantino movie. Ngikhethe ngokukhethekile Kill Bill okungeyona neze ifilimu yomqondisi wegazi engcono kunazo zonke, kepha kungaba cishe ukunambitheka kwawo wonke umuntu, yize sengivele ngikuxwayisa ukuthi sizobona igazi yonke indawo.
Yize ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili kusikrini esikhulu, iyifilimu eyodwa enesikhathi esingaphezu kwamahora ama-4. Ungaqala ngokubuka ingxenye yokuqala, bese uqeda ngesesibili uma ungakalali futhi unesithukuthezi ngeyokuqala, okungaba ngokuphelele.
¿Ulungele ukungena kwi-jumpsuit ephuzi futhi ube yinto esondele kakhulu ku-Uma Thurman owake wambona?.
Lezi izincomo zethu eziyi-12 zabaya kumabhayisikobho kuleli hlobo futhi manje sethemba nje ukuthi uthanda wonke amafilimu esiwahlongozile, kodwa futhi angithandi ukuthi manje yinina enisincomela amanye, noma ngabe hlobo luni, ukuze sikwazi ukunweba lolu hlu. Izosiza nalabo asebevele babona ama-movie amaningi kulolu hlu bangaqhubeka nokubona okuningi futhi bajabulele ihlobo.
Ungasithumela uhlu lwakho lwamafilimu kuleli hlobo ngesikhala esibekelwe ukuphawula ozothola okuncane ngezansi noma ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu esikhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Ama-movie we-12 wokuthokozela kuleli hlobo
Imibono yegama lomsebenzisi: Thola isidlaliso esifanele samaNethiwekhi wethu Omphakathi
I-LG G4, inketho ethokozisayo ngaphakathi kwebanga eliphakeme